eNasha.com - कान्तिपुर बिनाको बिहानी
कान्तिपुर बिनाको बिहानी
नेपालमा प्रजातान्त्रसँगै हुर्किरहेको थियो, कान्तिपुर । अनि मेरो युवापन पनि कान्तिपुरसँगै हुर्कियो । धेरै जनाको बिहान कान्तिपुर नपढी बिहान हुँदैन । यस्तो अवस्थामा म तीन दिनदेखि बिहानीरहित बिहानीमा उठ्दै अफिस जाने गरेको छु । ज्यादै खल्ला भइरहेका छन्, मेरा बिहानी । कान्तिपुर टीभीबाट थाहा भयो, माओवादी मजदूर संगठनका अध्यक्ष शालिकराम जमरकट्टेलले कान्तिपुरलाई सिध्याउने धम्की ! यसपछि लाग्यो, माओवादीहरु जङ्गलबाट शहर त पसे, तर शहरी सभ्यता सिक्न चाहिँ भुलेछन् ।
त्यसो त माओवादीहरुले यसलाई मालिक र मजदूरबीचको झगडाका रुपमा लिइरहेका छन् । जहाँ शोषण हुन्छ, त्यहाँ आन्दोलन हुन्छ भन्ने मार्क्सवादी चिन्तनलाई नै उनीहरुले मुख्य आधार बनाएका हुन् । त्यहाँ भइरहेको आन्दोलनलाई अधिकांश मजदूरको समर्थन पनि छ । कतिसम्म भने मेरो घर छेउका एक कान्तिपुर-कर्मचारीले भने- "माग त हाम्रा लागि ज्यादै राम्रो हो, तर के गर्ने खुलेर समर्थन गर्न पनि डर लाग्छ । र, तिनको 'एप्रोच' पनि त्यति ठीक लागेन ।" उनलाई त अहिले के डर छ भने पटक-पटक विभिन्न बहाना बनाएर भत्ता र तलब काटिरहेको कान्तिपुरले यस पटकको दशैँ पेश्की यही बहानामा नकाटोस् !
कान्तिपुरभित्रको मजदूर-मालिक झगडा कुटाकुट, धरपकड र मुद्दामामिलासम्म पुग्दा पनि साम्य भएको छैन । तर सत्य के हो भने कान्तिपुरभित्र समस्या चाहिँ छ । कान्तिपुर मात्र किन, हरेक ठूला व्यापारिक घरानामा समस्या छन् । अझ पत्रिकामा त बढी नै समस्या छन् । त्यहाँ मजदूरहरुको चरम श्रम शोषण छ तर समाचार उत्पादन गर्नेहरुको समाचार चाहिँ कहिल्यै बन्दैन । पत्रिकाहरु आफूलाई सबैभन्दा शक्तिशाली ठान्छन्, मानवअधिकार, न्यायापालिका र नेताभन्दा ठूला र शक्तिशाली । कान्तिपुर कति शक्तिशाली छ भने- उसले मजदूरलाई यसरी मिचेर समाचार पेलेको पेलेकै छ कि त्यहाँ उठाइएका 'जायज' माग 'बबुरो' बन्न पुगेको छ । कान्तिपुरको मात्र के कुरा, अधिकांश समाचार उत्पादन गर्ने थलोको यस्तै हालत छ । बेलाबेलामा पत्रिकाहरुले निमर्मतापूर्वक पत्रकार र मजदूरहरुलाई बलिको बोको बनाएर बिनाकुनै पूर्व सूचना निकालिएका छन् । र, ती निकालिएका मजदूरको आवाज पत्रिका परिसरबाहिर निस्कन सकेको छैन ।
मजदूरहरुको स्थिति सञ्चारमाध्यममा कति दयनीय छ भन्ने उदाहरण खोज्न धेरै टाढा पुग्नै पर्दैन । एचबीसी एफएममा माओवादी समर्थित कर्मचारीहरुले एफएमको सुचारु रोके भनेर हप्तौँ अन्न-पानीबिना धर्ना बस्ने एफएम सञ्चालक वीरेन्द्र दाहालले धर्ना सकिने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला सबै कर्मचारीहरुलाई एफएमबाट निष्काशन गरेको सूचना टाँगिदिए । 'मालिक'हरुको 'मोनोपोली' यस्तो छ ।
मालिकहरुको यस्तो चरित्रलाई राम्रैसँग बुझेका माओवादीहरुले कान्तिपुरमा आफ्नो बल बढी नै प्रयोग गरेका छन् । तर जब माओवादी मजदूर संगठनका प्रमुख जमरकट्टेलले नै कान्तिपुर सिध्याउने धम्की दिए, उनीहरुले पाउनुपर्ने नैतिक समर्थनको तिलाञ्जली तत्काल दिए । कान्तिपुरको समस्या, कान्तिपुरभित्रै समाधान गर्नुपर्ने हो तर माओवादीका केन्द्रीयस्तरका नेताले यसरी टीभी र पत्रिका नै सिध्याउने धम्कीले चाहिँ माओवादीलाई नै हानी गरेको छ ।
चुनावको मुखमा आएर माओवादीहरुले धमाधम पत्रिका, एफएम र विभिन्न कलकारखानामा किन यसरी हुलदङ्गा मच्चाइरहेका छन् ? आफूलाई मत नआउने सानो व्यापारिक घरानालाई काखी च्याप्नुभन्दा त्यहाँ काम गर्ने अधिकांश मजदूर र तिनको मर्कालाई बुझ्ने प्रयास गर्‍यो भने उनीहरुप्रति समर्थन बढ्ला भन्ने उनीहरुको सोचाईले नै बढी काम गरेको हुनसक्छ । माओवादी नेता कृष्णप्रसाद महराले पटक-पटक पत्रकारहरुसँग भन्ने गरेको शब्द याद आउँछ, उनले पटक-पटक पत्रकारहरुसँग भन्ने गरेका छन्- "या त हामीले यो कुरा बुझाउन सकेका छैनौँ, या त तपाइँहरुले हाम्रा कुरा बुझिरहनु भएको छैन ।"
भनिन्छ, सत्यको एउटै मात्र आयाम हुँदैन, अनेक आयाम हुन्छन् । कान्तिपुरले लगातार भनिरहेको सत्यको एउटा पक्ष त छँदैछ, त्यो जनताले थाहा पाइसकेका छन् तर यसैबीच अर्को पक्ष चाहिँ गायब छ । त्यो सत्य हो, कान्तिपुरका मजदूरहरुको आवाजको सत्यता । कान्तिपुरले आफ्नो शक्ति त देखाइसकेको छ, मजदूरहरु थुनेर, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, विभिन्न संघसंगठनहरुलाई आफ्नो पक्षमा बोल्न लगाएर । अब उसले उत्तिकै तदारुकता चाहिँ तिनका 'जायज' मागका बारेमा पनि सुन्नु पर्छ । ताकि भोलि बिहान म उठ्दा फेरि कान्तिपुररहित उठ्नु नपरोस् र कान्तिपुर टेलिभिजनको समाचारमा आधाभन्दा बढी समय माओवादीविरुद्धका खेदो खनेको र देशका वास्तविक समस्याका बारेमा चाहिँ बोल्दै नबोलेको अवस्था देख्नु नपरोस् ।
यो त प्रमाणित भइसक्यो, माओवादीहरुको शैली जङ्गली छ । तर जो सभ्य छ, उसले चाहिँ सभ्य तरिकाले जङ्गलीहरुलाई सभ्यतातर्फ ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । यति धेरै व्यक्ति र संगठनहरुबाट खप्की खाइसकेपछि माओवादीहरुले पनि आफ्नो शैलीलाई सुधार्नु पर्ने चेत त पक्कै घुस्यो होला !
माओवादी संविधानसभा हल्ला सेलेब्रिटी मोबाईल awards streets hi-life पेट्रोल अनुभव crisis समलिङगी celebrity festival events